Samsung dia afaka niverina tao amin'ny Android Wear amin'ny alàlan'ny smartwatch | Androidsis
Ilay natsipin'i Google tao anaty lamba famaohana taona maro lasa izay tao amin'ny kinova Android ho an'ny takelaka indrindra nanintona ny saina, saingy indrisy fa toa mahazatra eo amin'ny orinasa izany, satria niaraka tamin'ny Wear OS ny telo ampahefatry ny mitovy nitranga. Noho io fanaovana tsirambina ataon'ny Google io dia maro ireo mpanamboatra izay nijanona tsy nampiasa azy io intsony tamin'ny sehatry ny sahan'izy ireo.
Na izany aza, misy zavatra mety miova ao anatin'ny volana ho avy raha mitandrina ny kaonty Twitter UniverseIce, izay milaza izany isika Samsung dia mieritreritra ny hisolo ny Tizen amin'ny smartwatches ho an'ny Wear OS amin'ny taranaka ho avy izay avoakany eny an-tsena.
Azo inoana fa mieritreritra ny hanova ny rafitra fiasa i Samsung noho ny tsy fisian'ny fampiharana azo ampiasaina ho an'ny Tizen, iray amin'ireo olana sendra anay hatrizay tamin'ity sehatra ity, saingy afaka nandresy i Samsung noho ny fampiharana azy ireo.
Samsung dia nanomboka ampiasao ny Tizen amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ny 2014 miaraka amin'ny Gear 2 sy Gear 2 Neo. Mandra-pahatongan'izany dia nampiasa ny Android Wear aho satria nantsoina ity kinova Android maivana ho an'ny fitaovana azo ampitaina ity.
Tsy vao sambany io
Tsy vao sambany io, ary mety tsy ity no farany henontsika momba ny Mety hialan'ny Samsung amin'ny Tizen ao anatin'ireo karazana famantaranandrony maranitra, tsaho efa niely nandritra ny taona maro.
Azo inoana fa Samsung dia tsy noho ny asan'ny manohy mitazona rafitra fandidiana ho an'ny smartwatches izay ananantsika (Wear OS) tahaka ny nifandraisany tamin'ny takelaka misy azy ireo, noho ny fandaozan'i Google.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry ny fandefasana ireo maodely manarakaIreo modely mety hahita ny mazava amin'ny volana aogositra, rehefa manolotra ny taranaka fahatelo an'ny Galaxy Z Fold ny orinasa Koreana, daty izay hahalalantsika ihany koa raha tena nijanona ny fisian'ny Note.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia afaka niverina tao amin'ny Android Wear amin'ny fantsom-pahaizany
Ahoana ny fomba handefasana tenimiafina LastPass mankany Bitwarden
Ny Nubia Red Magic 6 dia havoaka amin'ny 4 martsa miaraka amin'ny famandrihana haingana 66W